École de la Foi – Centre Évangélique International Évidence
Ny mpitandrina ekipa
Mpitandrina Évidence Montrouge
Mpitandrina Évidence Évry
Mpitandrina Évidence Valenton
Hours ny fanompoam-pivavahana
Réunions des femmes
Adiresy sy ny sarintany
Home / Fiaraha-mientana / École de la Foi
Ny asa ao amin’ny fanompoana ny Kristianina avy amin’ny departemanta rehetra ny porofo!
Dia tsy maintsy aloha ny finoantsika ho miorina amin’ny fanorenana mafy orina ara-baiboly! Avy eo, toy ny ary rehefa mitombo amin’ny finoana, dia zava-dehibe mba hampiofanana ny hanompo!
Form dia mitaky ezaka manokana sy ny fanoloran-tena manokana. Amin’ny maha Kristianina, dia tsy voantso ho afa-tsy “mpanjifa”. Fa Andriamanitra dia manantena antsika no mamoa voa miendrika ny fiantsoana izay efa niantso antsika.
Ny Sekolin ‘ny finoana dia eo fanompoana noho izany tanjona.
1 ambaratonga – kilasy “Alpha”
Raha vaovao ato am-piangonana ary ianareo dia mangetaheta ny hahafantatra ny Baiboly hafatra, ny olona ‘Andriamanitra, ny asan’i Kristy sy ny asan’ny Fanahy Masina, misoratra anarana avy hatrany! Ho hitanareo ny fitiavana tia anao Andriamanitra.
2 ambaratonga – kilasy “New Life”
Mankany am-piangonana ianao ho be ny fotoana kelikely, ary efa niaina ny “fiovam-po” sy ny “fahateraham-baovao”. Ity kilasy dia hamela anao hanao bebe kokoa eto amin’ity fiainana vaovao, eo ambanin’ny fitarihan’ny ‘Andriamanitra sy ny Fanahy.
Faha-3 ambaratonga – kilasy “Ny famohazana ny Finoana”
Efa namaky ny kilasy “New Life,” ary hiandrandra ho lasa tena mpianatr’i Kristy. Ity kilasy dia hamela anao (indray) mametraka ny fototry ny tena fiainana kristianina – ny nandresy fiainana kristianina!
Ambaratonga faha-4 – kilasy “fototry ny finoana”
Efa namaky ny kilasy “Ny famohazana ny finoana”, izay mianatra ny ho tonga tena mpianatra.
Ary ianareo no ao am-pianarana, toy ny Apôstôly Paoly ho an’ny Galatianina, dia hahazo ventin-kanina, ka manomboka tsy mitondra tena tahaka ny ankizy, fa ny lehilahy sy vehivavy tompon’andraikitra.
Amin’izay ianao dia hianatra kilasy fankatoavana ny Soratra Masina, satria mahomby andraikitra ao amin’ny Fiangonana, ny tenan’i Kristy mifono zava-miafina.
Ambaratonga faha-5 – kilasy “Fandalinana Faith”
Nandritra ny taona maro, ianao dia nanao ny Sekolin ‘ny Finoana. Nitombo ara-panahy ianao, efa matotra eo amin’ny traikefa Kristiana.
Tsy mila mpiambina, fa tamin’ity taona ity, ao amin’ny indray, mianatra mba ho fanampiana ho an’ny hafa. Tsy vitan’ny Hivoatra ianao ihany, fa ianareo dia ho afaka ny fampandrosoana ny hafa. Ho Kristianina mahatoky, ary ny fiangonana, ny modely izay hamela ny hafa hitombo araka izay nataonao!
6 ambaratonga – kilasy “Development-pinoana”
Ianao tonga any amin’ny faran’ny ny tsingerin’ny ‘ny Sekolin’ ny Finoana. Efa nianatra zavatra maro, ary mihoatra noho ny rehetra, mba hametraka izany zavatra izany ho fampiharana eo amin’ny fiainanao!
Ao am-pianarana amin’ity taona ity, dia hanana ny lafiny manontolo ny olon-dehibe sy matotra Kristianina, afaka mba hanatanterahana ny zavatra andrasana avy aminy, ary mba haka hetsika ho amin’ny fitomboan’ny fiangonana. Ho lasa Kristianina mba handray andraikitra, ka mieritreritra, amin’ny fiaraha-miasa amin’ny asa fanompoana akaiky amin’ny fiangonana lohany.
New aho eto
Misy mahasoa vohikala